NCHOPUTA NA ULE NKE DISK DISKI. USORO KACHASỊ MMA MAKA ỊRỤ ỌRỤ NA HDD - DISK - 2019
Diski ike - otu n'ime ngwaike kachasị mma na PC! Ịmara na ọ bụ ihe na - ezighị ezi na - ị nwere ike ijikwa ịnyefee data niile na mgbasa ozi ndị ọzọ n'enweghị ọnwụ. Ọtụtụ mgbe, a na-anwale diski ike mgbe achọtara diski ọhụrụ, ma ọ bụ mgbe ụdị nsogbu dị iche iche pụta: faịlụ na-depụtaghachi ya ogologo oge, PC na-apụnahụ mgbe disk meghere (nweta), ụfọdụ faịlụ kwụsị ịgụ, wdg.
Na blog m, n'ụzọ, enwere ihe ole na ole e tinyere maka nsogbu na draịva siri ike (nke a na-ezo aka dị ka HDD). N'otu isiokwu ahụ, M ga-achọ itinye usoro mmemme kachasị mma (nke m ga-enwe) iji kwado ya na-arụ ọrụ na HDD na ụyọkọ.
Site na saịtị: //hdd-911.com/
Fig. 1. Victoria43 - window nke usoro ihe omume ahụ
Victoria bụ otu n'ime usoro ndị a ma ama maka ule na ịchọta ihe nrụgide. Uru ya karịa ihe omume ndị ọzọ nke klas a doro anya:
nwere oke nkesa nke obere;
ọsọ ngwa ngwa;
otutu ule (ozi gbasara ala nke HDD);
rụọ ọrụ "ozugbo" ya na draịvụ ike;
Na blog m, site na ụzọ, e nwere otu isiokwu gbasara otu esi elele HDD maka ihe ọjọọ na ọrụ a:
Site na saịtị: //hdat2.com/
Fig. 2. hdat2 - isi windo
Enyemaka ọrụ maka ịrụ ọrụ na diski ike (ule, nyocha, ịgwọ ọrịa ọjọọ, wdg). Ihe dị iche na isi dị iche site na onye a ma ama Victoria bụ nkwado nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-arụ ọrụ: ATA / ATAPI / SATA, SSD, SCSI na USB.
Site n'ụzọ, HDAT2 kama nke ọma na-enye gị ohere iweghachi ebe ọjọọ na diski ike gị, ka HDD gị wee jee ozi n'ikwesị ntụkwasị obi ruo oge ụfọdụ. More na nke a ebe a:
Onye Mmepụta saịtị: //crystalmark.info/?lang=en
Fig. 3. CrystalDiskInfo 5.6.2 - S.M.A.R.T. diski
Inweghi ohere iji chọpụta diski ike. Na usoro a, usoro ihe omume ahụ na-egosi na data nke S.M.A.R.T. (site na ụzọ, ọ na-eme ya n'ụzọ zuru oke, n'ọtụtụ forums mgbe ị na-edozi nsogbu ụfọdụ na HDD - na-arịọ maka akaebe site na ọrụ a!), ma na-edekwa ihe ndekọ nke okpomọkụ ya, ozi zuru ezu gbasara HDD gosipụtara.
- Nkwado maka akpa USB;
- Nyochaa ike na ọnọdụ okpomọkụ HDD;
- Nhazi oge S.M.A.R.T. data;
- Jikwaa ntọala AAM / APM (bara uru ma diski ike gị, dịka ọmụmaatụ, na-eme mkpọtụ:
Site na: //hddlife.ru/index.html
Fig. 4. windo nke usoro ihe omume HDDlife V.4.0.183
Uzo a bu otu n'ime ndi kachasi nma! Ọ na-enye gị ohere ịnọgide na-enyocha ọnọdụ niile nke ike gị siri ike, ma, ọ bụrụ na nsogbu, kọọrọ ha oge. Dịka ọmụmaatụ:
enweghị ohere disk, nke nwere ike imetụta arụmọrụ;
karia ebe a na-echekwa ya;
ọjọọ na-agụ site na disk SMART;
ike mbanye "aka ekpe" iji dịrị ogologo ... na ihe ndị ọzọ
Site n'ụzọ, ekele maka ọrụ a, ị nwere ike (yabụ) ịkọtara ogologo oge gị HDD ga-adịru. Ọfọn, ọ bụrụ, n'ezie, ọ dịghị ike majeure ...
Ị nwere ike ịgụ gbasara ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị otú a ebe a:
Onye Mmepụta saịtị: //www.steffengerlach.de/freeware/
Fig. 5. Nyocha nke ebe ejiri ya na HDD (skanner)
A obere uru maka ịrụ ọrụ na draịva siri ike, nke na-enye gị ohere ịnweta ọkwa akara nke oghere ahụ. Ihe odide dị otú a na-enye gị ohere ịchọta ngwa ngwa na diski ike gị na ihichapụ faịlụ ndị na-adịghị mkpa.
Site n'ụzọ, ọrụ a na-enye gị ohere ịchekwa oge dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ diski ike ma jupụta n'ụdị faịlụ niile (ọtụtụ n'ime ha anaghị achọ gị, ma chọọ ma nyochaa "aka" ruo ogologo oge).
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọrụ ahụ dị nnọọ mfe, echere m na agaghị enwe ike itinye usoro dị otú ahụ n'isiokwu a. Site n'ụzọ, o nwere ihe analogues:
Nke ahụ niile. Kwụsị izu ụka niile. Maka mgbakwunye na nyocha maka isiokwu ahụ, dị ka mgbe niile ekele!